ငြိမ်းချမ်း| January 15, 2013 | Hits:1,560
AunG January 15, 2013 - 5:57 pm Goodjob ! We all Burma Ethnic Peoples support to Kachin People…
Reply Full Moon January 16, 2013 - 7:47 am Our brothers and sisters Rakhines deserve credits for firm stand. They experienced bitter violenceafew moths ago in their homeland but the Rakhines are voicing the loudest cry for the Kachins. I love Rakhines and I trust Rakhines.
Reply ဗမာ January 16, 2013 - 8:53 am ကချင်အရေးနဲ့ပတ်သတ်လို့ပြောရရင် နှစ်ဖက်စလုံးက ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိတာကိုတွေ့မှာပါ။ တကယ်လို့နှစ်ဖက်စလုံးကပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို ပြည်သူနဲ့ကမ္ဘာကိုချပြရဲတယ်ဆိုရင် တစ်ခုပဲတောင်းဆိုချင်တယ်။ မြန်မာအစိုးရနဲ့ကချင်ခေါင်းဆောင်တွေ ကျင်းပတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကို မြန်မာ့ရုပ်သံကနေ LIVE ထုတ်လွှင့်ပြသလိုက်ပေါ့။ ဒါဆိုရင်နှစ်ဖက်ပြည်သူတွေ (မြန်မာပြည်မ နဲ့ ကချင်ပြည်သူ) ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားကြရမှာပါ။ ဒါဆိုရင် အားလုံးက ဘယ်သူကတော့လွန်တယ်၊ ဘယ်သူကတော့မှားတယ်ဆိုတာ သိသွားမှာပေါ့။ တိတ်တိတ်ကြိတ်ပြီးလုပ်တတ်တာ မြန်မာပြည်အုပ်ချုပ်ရေးသမိုင်းမှာ အရိုးစွဲနေပါပြီ။
Reply @_@ January 18, 2013 - 12:11 pm Right… သူတို့မှန်တယ် ထင်ရင် LIVE လွင့်လို့ ရတာဘဲ